Dagabageed: ” Waa Looga Maarmaa Shirka Odayaasha ka soo horjeeda”. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 31 March 2016
Isagoo la hadlayay Warbaahinta Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Odayaasha qaadacay shirka Jowhar laga kaaftoomay islamarkaana aanu jirin natiijada shirkaas cid ka hor imaan karta.
Yuusuf Dabageed ayaa carabka ku adkeeyay in maamulkiisa iyo dowladda Federaalka ay ku guuleysteen in Odayaasha reer Hiiraan u matalaya shirka maamul u sameynta labada gobol ay ku qanciyaan tagista Jowhar.
“ Madaxweynaha lagu soo doorto Jowhar halkaan Baladweyne ayaa lagu caleemo saarayaa, mana jirto cid ka hor imaan karto” ayuu yiri Dabageed.
Hadalka Dabageed ayaa imaanaya iyadoo qaar ka mid ah Beelaha reer Hiiraan ay ka biyo diidan yihiin ka qeyb galka wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Beelaha Diidan shirkaas ayaa waxaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka soo jeeda Gobolka Hiiraan